अर्थमन्त्री शर्माले देखे किसानको पीडा - Web Tv Khabar
२०७८, मंसिर १३ गते सोमवार
अर्थमन्त्री शर्माले देखे किसानको पीडा
कार्तिक ३, २०७८ बुधवार १६:४९ बजे
सर्लाही । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बुधबार हेलिकोप्टरमा सर्लाही पुगे । अर्थमन्त्री शर्मासँगै सर्लाहीका समाजसेवी एवं पूर्वसांसद नरेन्द्र साह पनि थिए ।
साहले अर्थमन्त्री शर्मालाई किसानले भित्र्याउन काटेको धान बेमौसमी वर्षाले खेतमै डुवेको दृष्य देखाए । हेलिकोप्टरबाट देखिने दृष्य निकै दारुण थियो ।
बर्षभरि खाने धान भित्र्याउने बेलामा बेमौसमी बर्षाले क्षति गरिदिँदा किसानलाई हुने पीडा कस्तो होला ?
यी दृष्य देखेर अर्थमन्त्री शर्मा पनि भावुक भए । उनले आजै बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यसबारे कुरा राख्ने बताए । किसानका लागि केही न केही राहतको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता शर्माले जनाए ।
मानो रोपेर मुरी फलाउने आशामा असारमा घाम पानी नभनी खेती गरेका किसानले धान भित्र्याउने बेलामा बेमौसमी झरीले पुर्याएको क्षति प्रति अर्थमन्त्री शर्मा गम्भिर भएका थिए । किसानको मेहनत र सपना चकनाचुर भएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गर्दै राज्यले केही न केही सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
माओवादी नेता शिवपुजन रायको दिवंगत पिता अमिरी रायको १३ औ पुण्य दिनको तिथीमा सहभागी हुन पुगेका शर्माले सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिमा वडा ११ हिरापुरमा २०२२ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रको पालामा बनेको पुरानो सिंचाई आयोजना मुनष्माराको पनि निरीक्षण गरे ।
मनुष्माराको ब्यारेज र पुल पुरानो भइसकेकाले त्यसलाई जिर्णोद्वार गर्न अर्थमन्त्री शर्मालाई पूर्व सांसद साह, नगरपालिकाका मेयर देवानन्द महतो र स्थानीयले आग्रह गरे । मनुष्मारको क्षमताअनुसार सिंचाई क्षेत्र विस्तार गर्न, त्यहाँबाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने बारेमा अध्ययन गर्न स्थानीयले अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेबका थिए ।
पुल जीर्ण हुँदा सर्वसाधारणलाई आवतजावत गर्न समस्या भइरहेको स्थानीयवासीले गुनासो गरे । निरीक्षणपछि मन्त्री शर्माले उक्त ब्यारेज जीर्णोद्धार र संरक्षणमा आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग रहने बताए ।
अर्थमन्त्री शर्माले त्यहाँको डिपिआर तयार गर्न लगाएर काम अघि बढाउने आश्वासन दिए । अर्थमन्त्री शर्मा केही घण्टाको सर्लाही बसाइपछि काठमाडौं फर्किएका थिए ।
नेपालमा छुट्टाछुट्टै न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव, कस्तो छ आजको मौसम ?
खोटाङमा मतदाता नामावली संकलनको तयारी थालियो
एमाले महाधिवेशन : बिहान ८ बजेदेखि निर्वाचन प्रक्रिया सुरू हुँदै
यस्तो छ दर्ता हुन नसकेको भीम रावलको मनोनयन पत्र
ओलीको ३०१ केन्द्रीय समिति सूचीमा किन अटाएनन् दुर्गा प्रसाईं ?
ओलीले बन्दसत्रमा पेस गरेको केन्द्रीय समितिमा को-को परे ? (सूचीसहित)
शिक्षा ऐन जारी गर्ने तयारीमा सरकार
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रकाे शिक्षकहरूलाई यस्तो आग्रह
इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलबका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय सरकारसँग छलफल गर्ने
फलोअप : इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई तलब नदिने यी हुन् ३० स्थानीय तह [सूची]
शिक्षामन्त्रीले सुने इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले तलब नपाएको समस्या, अब के होला ? [भिडियाे]
[फलाेअप] इसीडी शिक्षक र कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न शिक्षा मन्त्रालयले बोलाएको बैठकमा जनप्रतिनिधि गएनन्
इसीडी शिक्षकको प्रश्न- तपाईंहरूलाई इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीप्रति दया लागेन शिक्षामन्त्रीज्यू ?
'इसीडी शिक्षकको पुरै तलब संघीय सरकारले पठाउनुपर्छ'